China Sport nnukwu ọnụ ụlọ Ọdịdị ụlọ ọrụ na-emepụta | Honghua
Agbapụ agbapụ maka Egwuregwu Eshia (Ebe Guangzhou na-efe efe na-efe efe disk) N'ime oru a, anyị ji kọlụm nchara tubular gbaa gburugburu, nke a na-eji dịka onye otu nhazi ụlọ egwuregwu. ụdị kọlụm a nwere ọtụtụ uru n'ihi njirimara ya.
Ogologo agbapụ maka Egwuregwu Eshia (Guangzhou na-efe efe disk ọzụzụ) Mwube: 12260㎡. Ngwakọta anyị na-enye ihe eji emepụta ígwè. Ọrụ anyị na-ekpuchi akwa akwa, ụlọ nchara, mgbidi mgbochi mgbidi, akụrụngwa ígwè.
N'ime oru a, anyị jiri kọlụm ígwè kọlụm gbara gburugburu, nke a na-eji dị ka onye otu nhazi nke ụlọ nzukọ egwuregwu. ụdị kọlụm a nwere ọtụtụ uru n'ihi njirimara ya. Enwere ike ịkọwa kọlụm nchara ígwè dị ka ogidi ndị mejupụtara nke ọkpọkọ ígwè jupụtara ma kpuchie ya. a na-atụle ya dị ka ihe nhazi nke na-eme ka ojiji nke ọ bụla n'ime ihe ọ bụla mejupụtara ya, ọtụtụ ndị injinia amụrụ ihe nke ọma maka nyocha na mmepe. Ogidi ndị mejupụtara ogidi anwụrụ na nchara nwere ike kewaa n'ozuzu dịka ụdị usoro ha si dị na ngalaba atọ ndị a bụ kọlụm nchara jupụtara na ihe, kọlụm nchara ígwè kpuchiri ya na kọlụm nchara ígwè jupụtara ma kpuchie ya.
Nke gara aga: Steel gburugburu steepụ
Osote: Prefabricated n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè nchara Ọdịdị